०३:५७, २६ जुन २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन
४० बाइटहरू हटाइयाे , ९ वर्ष अघि
r2.7.3) (रोबोट ले परिवर्तन गर्दै: ga:An Chalafóirn; अंगराग परिवर्तन
१७:३५, १ मे २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
०३:५७, २६ जुन २०१२ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (r2.7.3) (रोबोट ले परिवर्तन गर्दै: ga:An Chalafóirn; अंगराग परिवर्तन)
'''क्यालिफोर्निया''' पश्चिमी [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]मा एक ठूलो राज्य हो। यो क्षेत्रको हिसाबले तेश्रो सबै भन्दा ठूलो राज्य हो, केवल [[अलास्का]] र [[टेक्सस]] यो भन्दा धेरै जमिन छ। यहा [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को कुनै पनि अन्य भन्दा धेरै मानिस (३३ लाख भन्दा धेरै मानिसको) छन। लस एंजल्स (हलीवुड, विश्व भरमा चलचित्र बनाउन को लागि प्रसिद्ध, लस एंजिल्स को भित्र एक जिल्ला हो)र सैन फ्रान्सिस्को यसको सबै भन्दा प्रसिद्ध शहरह हुन। राजधानी सेक्रामेंटो छ।
क्यालिफोर्निया को वर्तमान राज्यपाल एडमण्ड जी "जेरी" ब्राउन हुन। ब्राउन १९७५ देखि १९८३ सम्म पनि राज्यपाल थिए, तसर्थ उनी राज्य को सबै भन्दा सबै भन्दा कान्छ र पाका राज्यपाल हुन।
क्यालिफोर्नियामा [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को कुनै पनि अन्य राज्यभन्दा धेरै मानिसहरु छन। यदि क्यालिफोर्निया एक अलग देश भएको भए यो विश्वमा छैठो सबै भन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हुने थियो। क्यालिफोर्निया शायद सबै भन्दा धेरै जातीय समूह भएको राज्य हो। आफ्नो ठूलो आकारको कारण, अन्य राज्यको तुलनामा शायद सबै भन्दा भौगोलिक विशेषताहरु छ - पहाड, मरुभूमि, तट - । यसलाई प्राय जसो गोल्डन राज्य भनियो, संभवतः १८४९ अघिको स्वर्ण दौडको कारणले। यसको वाहेक, केही घास गर्मिहरुको समयमा सुनौलो हुन्छन र राज्यको फूल सुनौलो हो। हुलाक सेवाले क्यालिफोर्नियाको लागी आशुलिपि को रूप "सीए" को उपयोग गर्दछ र एसोसिएटेड प्रेसले कलिफ् वा कलि प्रयोग गर्दछ।
अतीतमा, जुन पुरा क्षेत्रलाई अहिले हामी "क्यालिफोर्निया" भन्दछौ, आज को क्यालिफोर्निया थिएन । तर पनि यसको दक्षिणमा रहेको मेक्सिन भूमिलाई पनि समेट्दथ्यो, त्यसैगरी नेवादा, Utah, र एरिजोना र Wyoming को केही भागहरु । जमिनको त्यो हिस्सा जुन अंततः [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को भाग थियो लाई स्पेनिस भाषिहरुले Alta क्यालिफोर्निया (माथि क्यालिफोर्निया) भने जब यो बाजा क्यालिफोर्निया (लोअर क्यालिफोर्निया) देखि विभाजित भएको थियो । यिनी प्रारम्भिक समयमा, कोरटेज र प्रशांत तट को सागर को सीमाहरु को राम्ररी ज्ञात थिएनन्, यसैले क्यालिफोर्निया एक द्वीप हो भनी पुरानो नक्सा गलत रुपमा देखाईयो । Las sergas de Espladián (Spladian को आनन्द) बाट नाम आएको हो , Garci Rodríguez de Montalvo ले लेखेको १६ औं शताब्दीको पुस्तक, जहां एक स्वर्ग द्वीपलाई क्यालिफोर्निया भनियो।
पहिले यूरोपीय जसले तटको केही भागको भ्रमण गरे, Rodriguez Cabrillo जुआन, १५४२ मा पोर्चुगलबाट आए, क्रिस्टोफर कोलंबसले पहिले भ्रमण गरेको पचास वर्ष पछी । पहिले यूरोपीय जसले पुरा तट देख्यो उनी सर फ्रान्सिस ड्रेक थिए, १५७९ मा, र उनले निर्णय गरे कि ब्रिटिश यो स्वामित्व छ। तर १७०० को पछिको शुरु देखी, रोमन क्याथोलिक चर्च ("मिशनरियों") को स्पेनिश धार्मिक नेताहरुले स्पेनिश राजा र रानीबाट उत्तरी बाजा क्यालिफोर्नियाको क्षेत्रमा ठूलो उपहार पाए। यो धार्मिक मानिसले साना शहर र गांउ बसाए, प्रसिद्ध क्यालिफोर्निया मिशन। जब मेक्सिको अब स्पेन को द्वारा नियंत्रित भएको थिएन, मैक्सिकन सरकारले गांउहरु लियो, र उनीहरुले चाडै नै खालि गरायो।
[[Fileचित्र:Lightmatter sanfrancisco.jpg|thumb|[[San Francisco]], California|300px]]
१८४६ मा, मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध शुरू भएको थियो, क्यालिफोर्नियामा केही अमेरिकीहरुले एक क्यालिफोर्निया गणराज्य बनाउने आशा राखे। यि मानिसहरुले "भालू झण्डा" फहराए जसमा एउटा तारा सहितको एक स्वर्ण भालू थियो। यस गणराज्य अचानक समाप्त भयो, तथापि, जब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को नौसेनाको कमोडोर जन डी. Sloat सैन फ्रान्सिस्को खाड़ी तर्फ लागे। उनले भने कि क्यालिफोर्निया अब [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को हिस्सा हो। मैक्सिको संगको युद्ध समाप्त भएपछी, क्यालिफोर्निया दुई देशहरुको बीच विभाजित गरिएको थियो। मेक्सिकन भाग Baja California (उत्तर) र Baja California (दक्षिण) को मैक्सिकन राज्यों बन गया. (स्पेनिशमा "बाजा" को अर्थ "तल्लो" हुन्छ।) [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को लागी दिईएको भागको पश्चिमी भाग क्यालिफोर्निया आज राज्य बन्यो।
अमेरिकी नागरिक युद्ध (१८६१-१८६५) को दौरान, क्यालिफोर्नियाको धेरै मानिसहरु, विशेष रूपमा दक्षिणी भागको क्यालिफोर्निया, दक्षिण सही छ भनेर सोचेका थिए। दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा केही मानिसहरु यध्यपी दक्षिणी क्यालिफोर्निया बाकी राज्यलाई छोडेर र महासङ्घ भएको अमेरिकाको राज्यमा शामिल हुन चाहान्थे। जबकी, यो भएन, क्यालिफोर्निया उत्तर (सङ्घ) को पक्षमा युद्धको प्रयासमा शामिल भयो र महासंघसंग लडन धेरै सैनिकहरुलाई पूर्व पठायो।<ref>http://www.drumbarracks.org/Original%20Website/California.htm</ref> सबभन्दा पहिले, पश्चिम र [[संयुक्त राज्य अमेरिका]]को पूर्वी तटको बीच यात्रा खतरनाक थियो र धेरै समय लिन्थ्यो। भूमि मार्गद्वारा जानु धेरै मुश्किल थियो, किनकी त्यहा कुनै सड़क र कुनै सवारी साधन थिएन, र धेरै मूल निवासी अमेरिकीहरु पश्चिम तर्फ लागी रहेका आप्रबासी अमेरिकीहरुको बग्गीमा हमला गरिरहेका थिए। केवल अन्य तरीका नाउ द्वारा यात्रा केप हर्न को आसपास , दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी किनारामा भ्रमण थियो। यसले महिनौ लिन्थ्यो। किनकी यात्रा हजारौ मील लामो र पनामा नहर त्यस बेलासमा बनेको थिएन अर्को तर्फ। तर १८६९ मा, जोडिने काम राम्ररी चाडो भयो, किनकी महाद्वीपमा पहिलो रेल मार्ग पुरा भएको थियो। यस बीच, क्यालिफोर्नियामा अरु धेरै मानिसहरु जान्दै गहिरहेका थिए कि भूमि धेरै फल र अन्य बाली लगाउनको लागी राम्रो छ। सन्तोला खेती क्यालिफोर्नियाको धेरै भागमा भै रहेको थियो। यो विशाल कृषि व्यवसायको शुरुआत थियो जुन आज क्यालिफोर्नियामा छा।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/265742" बाट अनुप्रेषित